03/10/2018 - Page 3 sur 4 -
Atsimo Atsinanana : Olona 6 ahiana ho matin’ny pesta
Mitombo ireo matin’ny aretina pesta eto Madagasikara. Olona 6 indray no ahiana ho matin’ny pesta tany amin’ny faritra Atsimo Atsinanana, tamin’iny herinandro iny, araka ny loharanom-baovao avy amin’ny zandarimariam-pirenena. Miisa 4 ny olon-dehibe ary zaza …Tohiny
Sarimihetsika : Hihazo an’i Benjakely i Pasitera Malok’ila
Very anarana tamin’ny anarana hoe Pasitera tao amin’ilay tantara Malok’ila. Jocelyn Rakotondrafara no tena anarany, ary manomboka amin’ity andiany faha-3 ity, dia ho isan’ireo mpilalao ao anatin’ilay horonantsary « Benjakely » ihany koa izy. Rakotra …Tohiny
Fizarana fanafody : Tokony hitandrina ny rehetra
Amin’izao ankatoky ny fifidianana izao, saika manao fanomezana fanafody avokoa ireo kandidà entina hakana ny fon’ny olona. Tsikaritry ny minisiteran’ny Fahasalamana, fa misy an’ireny amin’ny fanafody zaraina ireny, tsy misy AMM na “Autorisation de mise …Tohiny
Tsy misy lanjany ny aina
Tsy misy olana amin’ny Malagsy intsony izao ny mandatsaka aina. Toa lasa tsotsotra izay raha notandrovana toa anakandriamaso hatramin’izay. Maro rahateo ny ohabolan’ny Ntaolo fahiny no milaza ny maha sarobidy ny aina. Ankehitriny toa zary …Tohiny